Hay’adda CCA oo dugsi wax lagu barayo Haweenka ka hirgelisay Xabsiga dhexe ee Muqdisho+Sawirro – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Hay’adda CCA oo dugsi wax lagu barayo Haweenka ka hirgelisay Xabsiga dhexe ee Muqdisho+Sawirro
On Jun 22, 2015 Last updated Jun 23, 2015
Munaasabad lagu daah-furayey Dugsi wax lagu bari doono Haweenka maxaabiista ah ayaa shalay lagu qabtay Xarunta Xabsiga Dhexe ee magaalladda Muqdisho.
Hay’adda Wacyi-gelinta Bulshadda ee CCA ayaa maalgelisay dhismaha Dugsigaasi, kadib, markii ay arkeen baahida loo qabo inay Maxaabiista helaan Waxbarasho inta ay ku jiraan Xabsiga.
Wasiirada Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha ee Xukuumadda Federaalka Somalia, Marwo Sahra Maxamed Cali Samantar oo ka hadashay Munaasabadda, ayaa ku ammaantay dadaalka ay Hay’adda Wacyi-gelinta Bulshadda ee CCA ugu jirto Horumarinta Nolosha Bulshadda.
Waxay kaloo ugu baaqday Dhallinyarrada Soomaaliyeed in ay ka tusaale qaataan Hay’adda CCA, isla markaana ay kaalin ka qaataan Mashruuca ”Dib-u-dhiso Dalkaaga”.
Marwo Sahra Maxamed Cali Samantar waxay kaloo sheegtay inay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha ee Xukuumadda Federalka diyaarinayso Sharciga Xuquuqda Gabdhaha Soomaaliyeed, iyadoo xustay in ay tacadiyo badan loo geysto gabdhaha, isla markaana lagu xadgudubo Xuquuqdooda.
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Dr. Axmed Cali Daahir ayaa isagana ka hadlay Munaasabadda lagu furayey Dugsiga wax lagu bari doono Gabdhaha Maxaabiista ah, wuxuuna sheegay inay tallaabo wanaagsan in xarun Waxbarasho loo furo Maxaabiista, si sare loogu qaado Aqoontooda.
Waxa kaloo uu u mahadceliyey Hay’adda Wacyi-gelinta Bulshadda ee CCA, kuna bogaadiyey Fikirka Wanaagsan ee ay ku soo kordhiyeen Horumarinta Aqoonta Maxaabiista ku xiran Xabsiga Dhexe ee magaalladda Muqdisho.
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Dr. Axmed Cali Daahir waxa uu xusay in horumar laga gaaray “Mashruuca Dib-u-dhiso Dalkaaga”, isla markaana ay dadka Soomaaliyeed aad u fahmeen Waddaniyadda iyo inay u midoobaan Dib-u-dhiska Dalka Hooyo.
Waxa uu intaasi ku daray in Mashruucaasi mid la mid ah la hirgelinayo kaas oo uu ugu yeeray “U hiili Sharciga”, si ay Bulshadda u fahmaan Muhiimadda Sharciga u leeyahay Qaranka.
Taliyaha Guud ee Ciiddanka Asluubta Soomaaliyeed, Jeneral Bashiir Maxamed Jaamac ayaa isagana ka hadlay Munaasbaadda, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey xaalladda iyo nolosha Maxaabiista iyo Tallaabooyinka lagu horumarinayo Dhismaha Xabsiga.
Jeneral Bashiir Maxamed Jaamac, waxa uu u mahadceliyey Guddoomiyaha Hay’adda Wacyi-gelinta Bulshadda ee CCA, Maxamed Ibraahim Cali “Maxamed Cajiib” oo uu xusay inuu yahay Halyeey Qaran oo Aqoontiisa iyo Xooggiisa ugu adeegayo Ummadda Soomaaliyeed .
Waxa uu intaasi ku daray in uu Guddoomiyaha CCA muddo Kooban gudaheeda ku hirgeliyey codsiga ay Ciiddanka Asluubta Soomaaliyeed u gudbiyeen oo ku aadanaa Dhismaha Dugsi wax lagu baro Gabdhaha Maxaabiista ee ku xiran Xabsiga Dhexe.
“Hay’adda Wacyi-gelinta bulshadda ee CCA waxay muddo isbuuc ah ku fuliyeen codsiga ku aadan dhismaha Dugsiga u gaarka ah Gabdhaha Maxaabiista” ayuu yiri Taliyaha Guud ee Ciiddanka Asluubta Soomaaliteed, Jeneral Bashiir Maxamed Jaamac, oo hoosta ka xariiqay haddii Hay’adkale lala kaashan lahaa dhismahaasi inay muddo saddex ah ku qaadan lahayd si ay uga soo jawaabaan codsigaasi.
Jeneral Bashiir Maxamed Jaamac, waxa uu carrabka ku dhuftay inaysan Dowladda Dhexe ama Dowladda Hoose ama Hay’ad kale wax kharaj ah ku biirinin dhismaha iyo qalabaynta Dugsiga ay Hay’adda CCA ka hirgelisay gudaha Xabsiga Dhexe ee Muqdisho.
Guddoomiyaha Hay’adda Center for community Awarness (CCA), Maxamed Ibraahim Cali “Cajiib” ayaa ka hadlay Munaasabadaasi, waxaana uu ugu horreyntii u mahadceliyey Taliyaha Ciiddanka Asluubta Soomaaliyeed, Jeneral Bashiir Maxamed Jaamac oo dadaal xooggan ugu jira Horumarinta Nolosha Maxaabiista.
Guddoomiyaha Hay’adda CCA, Maxamed Ibraahim Cali “Cajiib” waxa uu faahfaahin ka bixiyey in Dhallinyarradda ka tirsan Hay’adda CCA iska soo ururiyeen Kharajka lagu dhisay, laguna qalabeeyey Dugsiga u gaarka ah Gabdhaha Maxaabiista.
“Shaqaalaha Hay’adda CCA ayaa iska soo ururisay Kharajka lagu hirgeliyey Dhismaha, mana jirto Hay’ad ama Dowlad gaar ah oo Hay’adda CCA taageero ka siiyey fulinta Dugsiga u gaarka ah Gabdhaha Maxaabiista” ayuu yiri Maxamed Cajiib oo intaasi ku daray in ay Hay’adda CCA leedahay Fikirka, maalgelinta iyo Hirgelinta Dhismaha Dugsigaasi.
Sidoo kale, waxa uu sheegay inay Hay’adda CCA ku faraxsan tahay Hirgelinta Dugsigaasi, isla markaana ay qorsheynayaan inay Xabsiga Dhexe ee Xamar ka hirgeliyaan Dugsi u gaar ah Ragga Maxaabiista, si kor loogu qaado Aqoontooda.
Waxa uu tilmaamay in marka uu qofku aqoon leeyahay inuu garan karo Jihadda Fiican ee Nolosha, balse marka uu qofka jaahil yahay uu had iyo jeer galayo falal dembiyeedyo ama uu noqanayo qof aan mustaqbal lahayn.
Guddoomiyaha Hay’adda CCA, waxa uu sheegay inay Barayaal ka tirsan JaamacaddaSomaville wax bari doonaan Maxaabiista ku xiran Xabsiga, iyadoo Maxaabiista lagu qiimeynayo Heerkooda Waxbarasho.
Dhinaca kale, Munaasabadda lagu furayey Dugsiga u gaarka ah Haweenka Maxaabiista ku xiran Xabsiga Dhexe ee magaalladda Muqdisho waxaa lagu casuumay Ifraax Axmed oo ah Halyeeyad u dooda Xuquuqda Aadanaha, isla markana loo aqoonsaday U-ololeeyaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaaradda Afrika ee sannadkan 2015-ka.
Si kastaba ha ahaatee, Tallaabadda ay Madaxda iyo Shaqaalaha Hay’adda Wacyi-gelinta bulshadda ee CCA ku taabageliyeen Dugsiga wax lagu barayo haweenka ku xiran Xabsiga Dhexe ayaa aad loogu riyaaqay, waxayna Hay’adda CCA ku kasbatay sumcad iyo guul fulinta Mashruucaasi muhiimka ah, iyagoo aan wax kaalmo ah ka helin Dowladda Dhexe ama Dowladdo iyo Hay’addo kale.
Dhageyso: Barnaamijka Tartan Aqooneedka Degmooyinka Ee Radio Dalsan 22-06-2015